ဘာလဲဟဲ့ ဒုက္ခသည် ~ Myanmar Express
မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ အများအပြား မွေးထုတ်ပေးနေတယ်လို့ အာရှဒေသဆိုင်ရာ UNHCR ပြောခွင့်ရ ကစ်တီ မက်ကင်ဆီ (Kitty McKinsey) က ပြောပါတယ်။ အမှန်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက မွေးတာက သာမန်မြန်မာပြည်သူတွေချည်းပါပဲ။ သူတို့ဘာသူတို့ကိုက ဒုက္ခသည်လုပ်ချင်နေကြတာပါ။ ဒုက္ခသည် ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အနေအစား ချောင်ပြီး အထောက်အပံ့တွေ ရလို့ပါပဲ။ ဒုက္ခသည်ဆိုတာ နာမည်ကသာ ဆိုးတာ အင်မတန် သက်သာတဲ့အလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး အပျင်းကြီးတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် ခိုလုံရာနေရာ ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။သမီးက ဘုရားစူး ဒုက္ခသည်ပါ၊ ဘောင်းဘီတောင် အရှည်မဝတ်နိုင်လို့ အတိုလေးပဲ ဝတ်ထားရတာပါမြန်မာတွေ ဘယ်လောက် အပျင်းကြီးလာပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လာလဲဆိုရင် ကမ္ဘာမှာပဉ္စမမြောက် ဒုက္ခသည် အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်နေတာပဲကြည့်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံက UNHCR မှာ ၉၃,၀၀၀ ကျော် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး အခု နေနေပါတယ်။ ၅၅,၀၀၀ လောက်ကတော့ အမှန်တကယ် ဒုက္ခသည်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနေတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။အမေ့ကို မုဒိန်းကျင့်တယ်၊ အမေကို တပ်ရင်း (၂၁၆) ဦးက အရင် မုဒိန်းကျင့်တယ်၊ ပြီးတော့ တပ်ရင်း(၂၁၆) ကပဲ ဦးစိန်ဝင်း ကလည်း ကျင့်ထားသေးတယ်..ကျွန်မကိုလည်း ရုရှားက စစ်ဗိုလ်လေးတစ်ယောက်က ၁၈ နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး ရုရှားကို ခေါ်ပြီး မုဒိန်းထပ်ကျင့်တယ် (ရုရှားပြန် မေကိုလတ်)ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ UNHCR အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကနေ အခုချိန်အထိ မြန်မာဒုက္ခသည်ပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ကျော်ကို တတိယနိုင်ငံတွေမှာ အခြေချပြီး နေနိုင်အောင်အတွက် အကူအညီတွေ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒုက္ခသည်အစစ်ပါ၊ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပါလာလျှောက်တဲ့လူတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တိုင်းရင်းသားကဒ် ၇ ကဒ် ကိုင်ထားသူတွေ၊ ကိုယ့်ယောင်္ကျားနဲ့ကိုယ် ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ကို စစ်တပ်က မဒိန်းကျင့်လို့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ဆိုပြီး ပြောသူတွေပါပဲ။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ ဒုက္ခသည် ၉ သောင်း၊ ၇ သောင်း ကို မုဒိန်းကျင့်နိုင်လောက်တဲ့ခွန်အားမျိုးတောင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မက တကယ်ဒုက္ခသည်ပါ၊ ဗိုက်လေး ဖောင်းနေတာကိုပဲ ကြည့်ပါ၊ အဲ့ဒါ စစ်တပ်က မုဒိန်းကျင့်လို့ပါဒါကြောင့် စစ်သားဆိုရင် မုန်းလွန်းလွန်းလို့ စစ်ခွေးတွေ ဆိုတဲ့ပိုစ့်တောင် တင်ခဲ့ပါတယ်( မိုးသွေးငယ်နှင့် ဖောက်ပြန်သည်ဟု သတင်းထွက်နေသော အ်ာဇီရောက် ငယ်နိုင်)သြစတျေးလျနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခ သည် စခန်းဆင်း တွေကလည်း သူတို့အချင်းချင်း မတည့်ကြပါဘူး။ အတတ်ပညာက နည်းတဲ့အပြင် အသိပညာကပါ ညံ့ဖျင်းတာကြောင့် အမြဲ အနှိမ်ခံရပါတယ်။ အနှိမ်ခံရတိုင်းလည်း သူတို့အသုံးမကျလို့ ဆိုတာကို မေ့ထားပြီး အစိုးရ အသုံးမကျလို့ အနှိမ်ခံရတယ်လို့ပဲ ခံယူထားကြပါတယ်။ အနှိမ်ခံရတဲ့အပြင် အချင်းချင်းက အစည်းလုံးတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ပြိုင်ကြ ဆိုင်ကြတာလည်း ရစရာမရှိပါဘူး။ ဒါကလည်း သြစတျေးလျတင်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအားလုံးက မြန်မာအချင်းချင်းတွေ့ဖို့ဆို အမြဲရှောင်ကြပြီး ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ အချင်းချင်း ပြိုင်နေကြတာချည်းပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ဖို့ဆိုတာထက် ပြည်ပမှာ မြန်မာချင်း အတွေ့ခံရဲဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာလို့ထင်မှာ မကြောက်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။နယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရောက်လာကြတယ်။ ပြည်တွင်းကလည်း လာကြတယ်။ လေးငါးခြောက်လလောက်နေပြီးတော့ သူတို့က TV ဆိုရင် အပြားမှ။ ကြီးမှ ကြိုက်ကြတယ်။ Flat TV လို့ခေါ်တဲ့ TV အပြားက နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်တော့ သြစီက မြန်မာတွေ အိမ်တိုင်းနီးနီးရှိကြတယ်။တချို့ လည်း အပြိုင်အဆိုင် သူဝယ်ရင် ကိုယ်လည်းဝယ်တယ်။ ကိုယ်ကြီးရင် သူလည်းလိုက်ကြီးကြတယ်။ TV အပြားကလည်း High Defination က ကောင်းတော့ ရုပ်တော်တော်ရှင်းတယ်။ လူတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ပေါ့။ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းက TV အပြား မပြောနဲ့ ဂေါ်ပြားလောက်ပဲကိုင်ဖူးတဲ့လူက အခုဆိုရင် TV အလုံးမကြည့်ချင်။ အလုံးရှိနေရင် ဂုဏ်ငယ်သလိုမျိုး။ ငါ့အိမ်က အပြားက နင့်..အိမ်က အပြားထက်ပိုကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါက,နင့်ထက်ပိုပြီး ချမ်းသာတယ်ပေါ့။ ဒီလိုမျိုး။..ပြိုင်စရာမရှိ ကြံဖန်ပြီး အကြီးအသေး ပြိုင်ကြလေတယ်။လုပ်တဲ့အလုပ်က စက်ရုံမှာ။ ဈေးဆိုင်တွေမှာ။ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမား။ ၀င်ငွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိပ်မကွာ။ အတူတူလောက်ပဲ။ ဒါကိုများ TV အပြားပြိုင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့။ (အော်ဇီရော် ဘုန်းကျော်)ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မယ်လ၊ အုန်းဖျံ၊ ထမ့်ဟင်၊ နို့ဖိုး၊ ဘန့်ဒုံယမ်း၊ မယ်လအူး၊ မယ်ရာမိုနှင့် ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် ၁ နှင့် ၂ ရှိ နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူများကို ၂ဝဝ၆ မှ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထိ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ အပါအဝင် တတိယနိုင်ငံများသို့ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ နေထိုင်သူများအဖွဲ့ International Organization of Migration, IOM က စီမံ၍ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။တတိယနိုင်ငံကို ရောက်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ဒုက္ခသည် အတုတွေ များပါတယ်။ အများစုကတော့ အမေရိကန်ကို ရောက်သွားကြတာ များပါတယ်။ အမေရိကန်ရောက်ရင်တော့ သူတို့အချင်းချင်း စုပြီးတော့ပဲနေကြရပါတယ်။ ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ကိုယ် ရောက်နေတဲ့ လူတွေကတော့ အဲ့လို အရှက်မရှိဝင်လာသူတွေနဲ့ ကင်းရှင်းစွာပဲနေကြပါတယ်။ အရောမဝင်ကြပါဘူး။နိုင်ငံခြားမထွက်ခင်ကတော့ အမျိုးမျိုးပြောရတာပေါ့ နိုင်ငံခြားရောက်တော့လဲ ကိုယ့်စီးပွားရေးကိုယ်ပဲလုပ်ရတာပါ။ ကျန်တာတွေ သတိမရနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆို အဝေးကြီးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူရှိန်အောင်တော့ အင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်တွေပြရတာပေါ့။ အနီးကပ် လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်လာတာက နိုင်ငံရပ်ခြားကနေ ကီးဘုတ်ကိုင်တိုက်ပဲဝင်တာလောက် အကျိုးမရှိဘူးလို့ အဝေးရောက် ဒုက္ခသည်အားလုံးက ယုံကြည်ကြပါတယ်နိုင်ငံခြားရောက်ရင် နိုင်ငံရေးသမားကြီးလုပ်မယ်၊ သူဌေးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်(မင်းကိုနိုင်) Myanmar Express
Posted in: ဆင်ခြင်စရာ,ဘာလဲဟဲ့ ဒုက္ခသည်
23 June 2011 00:21
အော် ဒုက္ခသည်တဲ့သနားစရာကို တစ်ကွက်မှ မရှိပါလားယောင်္ကျားကြီးတွေလည်း ပါတာပဲရှက်လည်းမရှက်ကြဘူး
23 June 2011 00:22
ကောင်းလိုက်တဲ. ပိုစ်.မငယ်နိုင် က ဒါကြောင်. စစ်ခွေးတွေ စစ်ခွေးတွေဆိုပြီး တအားမုန်းနေတာကိုး
23 June 2011 00:43
ဗွီဒီုဖိုင်မှာ ကိုကျော်နိုင် ဂစ်တာတီးနေတဲ့ ပုံကြီးက ဟီးနေတာပဲဟား ဟားအားပေးနေတယ် ကိုမင်းကိုနိုင်ရေ
23 June 2011 00:54
အာဖဂန်တို့ အီရတ်တို့ အခြားနိုင်ငံတို့က ဒုက္ခသည်တွေဆိုတာ တကယ့်ဒုက္ခသည်တွေပါ။မြန်မာပြည်ကတော့ သေနတ်သံလေးကြတာနဲ့ထိုင်းဘက်ကိုထွက် တတိယနိုင်ငံကိုကူးတော့တာပါပဲ။တကယ့်ဒုက္ခသည်တွေမှမဟုတ်တာ သူတို့အချင်းချင်းအဆက်ဆက်လူတွေပဲ ခေါ်ယူတာပါ။ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အချင်းချင်းလုပ့်စားနေကြတာလေ။မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်တွေ ငတ်ပြတ်နေတာမရှိဘူးလေ။ဒုက္ခသည်အမည်ခံပြီးထောက်ပံ့ကြေးယူပြီး အခွင့်ကောင်းယူပြီးနေချင်လို့ ဒုက္ခသည်အမည်ခံနေတာပါ။မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်ဆိုတာ မသိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ တကယ်ပဲဒုက္ခရောက်နေသလားထင်နေမယ် အမှန်က ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေကအစ အရှုံးပေးရလောက်အောင် ကော့ပြန်နေအောင် နေနေကြရတာပါ။ပြီးရင်တော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောအုံးမယ် သြဇီရောက်တို့ အမေရိကားရောက်တို့ဆိုပြီး ကြွားလုံးထုတ်အုံးမယ်။ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲ ဒုက္ခသည်အမည်ခံပြီးရောက်နေရတာကို ရှက်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိကြဘူး။တကယ်တမ်း ဒီလူတွေဟာ စစ်ဖြစ်နေတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တာပါ။ဒါမှ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးနေရမှာမဟုတ်လား။ဒီဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ အစိုးရကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
23 June 2011 00:58
တကယ်တမ်း ဒုက္ခရောက်နေတာက ပြည်တွင်းက ဒုက္ခသည်တွေပါ။ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်တွေကိုပဲ စာနာထောက်ထားပါတယ်။ပြည်ပအမည်ခံ ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ ရွံပါတယ်
23 June 2011 01:36
ဦးဒစ်နီကြီးက တအားမိုက်ရိုင်းတာပဲသိလား ငယ်လဲ တဖြေးဖြေးနဲ့စိတ်ဝင်စားလာပြီ အဟိ ဒီဘလော့ကကောင်လေးတွေ က အကျင့်မကောင်းဘူးသိလား ငယ့်ဘလော့ကိုလာခဲ့နော်
23 June 2011 02:03
ဒီမိုအားလုံး Myanmar Express ဖွင့်ချတာတွေက လူရင်းတစ်ယောက် လုပ်နေတာတွေဆိုတာကို သတိပြုကြပါဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း ကိုလည်း သူ့ကျောင်းက ဂျူနီယာ ပါဆိုပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်Myanmar Express ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနီးဆုံးတွေမှာ ရှိနေပါတယ်ကိုယ့် facebook, gtalk နဲ့ ကိုယ်နဲ့အမြဲ တိုင်ပင်တတ်တဲ့လူတွေကို သတိထားပြီး စစ်ထုတ်ကြပါကိုယ့်အနီးနားမှာ ကိုယ့်လူ သူ့ဖက်သားတွေ သေချာပေါက်ရှိနေပါပြီ
23 June 2011 07:19
အမြင်မှန်ရစေချင်သူ said... ((( ဒီမိုအားလုံး Myanmar Express ဖွင့်ချတာတွေက လူရင်းတစ်ယောက် လုပ်နေတာတွေဆိုတာကို သတိပြုကြပါ ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း ကိုလည်း သူ့ကျောင်းက ဂျူနီယာ ပါဆိုပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ် Myanmar Express ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနီးဆုံးတွေမှာ ရှိနေပါတယ် ကိုယ့် facebook, gtalk နဲ့ ကိုယ်နဲ့အမြဲ တိုင်ပင်တတ်တဲ့လူတွေကို သတိထားပြီး စစ်ထုတ်ကြပါ ကိုယ့်အနီးနားမှာ ကိုယ့်လူ သူ့ဖက်သားတွေ သေချာပေါက်ရှိနေပါပြီ))))..တဲ့ ဆိုပြန်ပီ အစတုန်းက သူတို့ပဲရှရှားကဆိုပီး ပြောကြတယ် ခုလိုအမှန်တွေကြီးပြောတော့ အနီးမှာရှိနေပီတဲ့ဟားးးးသတိပေးတာ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ စာဖက်လူတိုင်း အကုန်နားလည်နေကြပီ ..နဲနဲလေးနောက်ကျသွားတယ်မထင်မိ့ဘူးလားးးး
23 June 2011 08:19
အမ လေး ပေါ်ကုန်ပါပီ တော့
23 June 2011 08:32
Well, that ngal naing girl is rather pitiful, did she say : military dog: perhaps her father as well? so she was an offspring of military dog?if shame could kill, these democampers with low life mentality could have been deadalong time ago!!! before even leaving their refugee camps!!!!!!!
23 June 2011 14:17
မေကိုလတ်ကို ဖုတ်ချင်လာပြီ....သူလေးက အတွေ့ အကြုံလေးရှိနေပြီ ဆိုတော့ မိုက်မှာဘဲ အပေးကောင်းမယ် ရုပ်လေးဘဲ.. ဘာလို့ သူလေးကို မကောင်းမြင်နေတာလည်း...ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီ နောက်ကနေဆော်လို့ ကတော့ ကော့နေမှာဘဲနော်... ပြောရင်နဲ့လူကသာ နည်းနည်းသေးတာ နိုးလေး၂ လုံးကတော့ ကွာလတီ ကောင်းနေလောက်ပြီ ...ဖင်းကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ပေါက်ဖွင့်ပေးချင်တယ်ကွာ..
24 June 2011 09:19
အနှိမ်ခံရတဲ့အပြင် အချင်းချင်းက အစည်းလုံးတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ပြိုင်ကြ ဆိုင်ကြတာလည်း ရစရာမရှိပါဘူး။ ဒါကလည်း သြစတျေးလျတင်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအားလုံးက မြန်မာအချင်းချင်းတွေ့ဖို့ဆို အမြဲရှောင်ကြပြီး ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ အချင်းချင်း ပြိုင်နေကြတာချည်းပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ဖို့ဆိုတာထက် ပြည်ပမှာ မြန်မာချင်း အတွေ့ခံရဲဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာလို့ထင်မှာ မကြောက်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။Yes, i agree above clause .It is absolutely right, most of the ppl come from Myanmar are challenge each other for non-sense .But they don't have courage to make challenger with foreigners .Once they meet with the foreigners , their faces are become like puppy and so sweet to serve for foreigners and their mouths cannot say anything and just say "Yes , yes" because they don't know to response properly .:Pr [kwfwrf; w&m;awGvdrfwwfBuGm; wwfBuwmrSmawmhwdk.ArmawGutawmfqkH;yJ/EdkidiHNcm;om;eJ.rsm;awG.&ifvkyforQcHBuonf/tcsif;csif;remvkdpdwfuvJtvGefMuD;Buonf/rvHkrvJNzifhrdrfudk,fudk,f,kHBunfNcufuif;rJhpGm vdrf&JBuoonf/raocsmyJolwyg;tm;EdSrfhcspGyfpGJaNymqkdavh&dSonf/Oyrm-tpdk;&0efxrf;tm;vHk;udkolrsm;auGs;wmpm;&olrsm;[kqdkNcif; ? tpdk;&0efxrf; b0NzifhbmrS&ayguf&vrf;r&SdyJvkyfae&olrsm;Mum;vQifrnfodk hcHpm;&rnfenf;/NrefrmNynfudktNrefNyefwmaumif;ygonf/pvHk;rSmuydkqkd;onf[kxifygonf/
24 June 2011 10:40
I like myanmarexpress blog .Now,Myanmar goverment is become smart .This way is better than shooting by bullets.
24 June 2011 16:44
တကယ်ပြောတာဟ မေကိုလတ်က ပေါင်လေးကဖွေးနေတာပဲအဖုတ်လည်းဖွေးနေမှာပဲနောကလည်းမိုက်တယ်ဖုတ်လိုက်၇င်တော့ လုံးဝဇိမ်ပဲကွာ ဖုတ်ခဲ့တဲ့သူကလုံးဝအလန်းပဲကွာ ငါကတော့ပုံကြည့်ပီးဂွမ်းထုလိုက်အုံးမယ်
24 June 2011 21:17
ပုံရှိရင်လဲ Myanmarexpress မှာတင်ပြီး မျှအုန်း
21 October 2011 21:23
မြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ယဉ်ကျေးမှုအမြင့်ဆုံးနဲ့ ဘာသာတရားကိုင်းရျိုင်းဆုံး...ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ် အောက်တန်းအကျဆုံး လူမျိုးတွေပါ...အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့လူမျိုးတွေပါ(တိုင်းရင်းသားများအပါအ၀င်) ကမ္ဘာမှာ သိပ်ကို အောက်တန်းကျလွန်းတယ်....ခုချိန်အထိပဲ...ဘယ် တော့မှလဲ တိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူး...ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကို မလေးစားဘူး၊ မရိုသေဘူး...ဆန်အတူတူ စားတာချင်းအတူတူ...နိုင်ငံခြားက ကောင်တွေကိုမှ ဖင်ခံချင်လဲခံတယ်....ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးကောင်းစားရေးကို ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး...ကိုယ်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ အခြားသူတွေ ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရင် မကူညီပဲ..အဖျက်ပဲလုပ်ချင်ကျတယ်... မြန်မာ(တိုင်းရင်းသားတွေ အကုန်လုံး)အမေရိကန်နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဖင်ခံချင်ကြတယ်...လိုးတာခံချင်ကြတယ်...ဒါပဲ..
5 December 2011 10:09
မိုက် ၇ိုင်း လိုက် တာ ကမ်း ကုန် ဘဲ ။
19 January 2012 15:52
မိုက်ရိုင်းတယ်လို.သူများကို လိုက်မပြောပါနဲ.... ကျွန်တော်တို. မပါဘူး အဲ.လိုပြောတဲ.ထဲမှာ မိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာကလည်း အဲလိုပြောတဲ.သူတွေကလည်းနည်းနည်းမှားတယ် ဒါပေမဲ.ဗျာ ပြောတဲ.သူကလည်းးး ဟိုကောင်မ နန်.ကျောဆွဲလို.ပြောတယ်ဖြစ်မှာပါ ပြောသာပြော အားပေးတာမဟုတ်ဘူးး ဒီလိုမိန်းမယုတ်တွေ ငါတို.နိုင်ငံ တိုးတက်ရာမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ထင်လို.ပါ ကိုယ်မြန်မာချင်းး တအားတော.ဆဲ.နဲဗျာ ဟဲတကယ်ပြောတာ နာအောင်တော.ပြောပါ အရမ်းကြီးတော. မပြောပါနဲ.
29 February 2012 16:10
ပြောချင်ရင်ဝေဖန်ချင်ရင်လဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝေဖန်ကြပါယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ပြောနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေမြန်မာစကားပါအများကြီးရှိပါတယ်မိုက်ရိုင်းဆဲဆိုတာတွေမပါစေချင်ပါဘူး ဒီWebsiteကိုယောက်ျားတွေချည်ပဲ တက်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး မိန်းကလေးတွေလဲကြည့်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် နည်းနည်းလေးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးရေးသားကြစေချင်ပါတယ်အခုဒီcommentကိုရေးတဲ့ သူကမိန်းကလေးပါပြည်တွင်းကအညတရမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါဆရာလုပ်တယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကြံပေးတာပါ
1 March 2012 01:32
အညတရ မိန်းကလေးသို့အဲဒီစကား ဒီမိုတွေကို သွားပြောပါ
1 March 2012 02:37
ပိုက်ဆံရှိတာမရှိတာကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ လာတာ မလာတာထက်တိုင်းပြည်ကို အပုတ်ချပြီးမှ ရောက်လာသူတွေနဲ့ယှဉ်တွဲနေရတာကို ရှက်တယ်မင်္ဂလာဆောင်လာတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့တွဲရိုက်အဲဒီပုံကိုသုံး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်ရဲ့နဲ့ ခရစ်ယာန်ပါလိမ်ပြောအဲလိုလူတွေက စစ်ခွေးတွေလို့အော်ရွံတယ်ဟေ့
1 March 2012 08:30
ဒီကောင်တွေ တိုင်းပြည်ကို အပုတ်ချပြီး ဒုက္ခသယ်လို့ပြောအခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ကြုံရာကျပမ်းတွေလုပ်ပါစ်ပို့အသစ်ကိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ရင်ကော့ပြန်မောက်မာ ၀ါကြွား လေဆိပ်က ၀န်ထမ်းတွေကို မိုက်ရိုင်းသူတို့ကပဲ စောက်တင်းကချချင်သေးတယ်နိုင်ငံခြားပါစ်ပို့ကိုင်လည်း ငါကတော့ စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးအထင်လည်းမကြီးဘူး အောက်တန်းစားတွေဒီလိုအောက်တန်းစား ဒုက္ခသယ်တွေကိုမြင်ပြီးကျန်တဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ကျောင်းလာတက်တဲ့ ငါတို့ကိုလည်းနိုင်ငံခြားသားတွေက သောက်တလွဲတွေလို့ ထင်တာအော့နှလုံးနာတယ်ဒီကောင်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်က သူများတံတွေးခွက်မှာပက်လက်မျောတာအပေါ်က မိန်းမတွေကိုသာ ကြည့်
1 March 2012 13:02
ဗွီဒီယိုကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဝေ့အိမ်ကလူကြီးကိုလဲ ဒီလူတွေနဲ့သောက်ေ၇ာမ၀င်ပါနဲ့ပြောတာ မရဘူးဗမာတွေခင်တယ်ဆိုပြီးသွားတာစပိုင်ပါဆိုပြီး စွပ်စွဲလွှတ်လိုက်တယ်လေနည်းတောင်နည်းသေး
မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် မင်းသမီး ရွှေမှုန်ရတီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
စစ်တပ်ကြောင့် မီဒီယာသမားတို့ မဖော်ပြခဲ့သည့် ကားချောက်ထဲကျသည့်သတင်း
အမေရိကန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဖွား အမေရိကန်အစိုးရဝန်ထ...
အတွေးအခေါ်နှင့် အရေးအသားများ အံ့မခန်း တိုးတက်လာ
Gmail တွေကို Hack ထားတယ်, Hack အုံးမယ် သတိထား ဆိုတ...
"ဝ" ဒေသ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းနိုင်ဘွယ်မရှိ...
မ နဲ့ မောင် အကြောင်းတွေကို လူတိုင်းကပြောနေ
မ တွေ မောင် တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ - ကြာကူလီ စိုင်းသိန်...
တိုင်ရင်းသူတစ်ယောက် မွတ်ကုလားကိုယူလျှင် ဘာဖြစ်လာမည်နည်း.
(၁) မိမိကိုးကွယ်သော ဘာသာကို ပစ်ပယ်ပြီး မူဆလင်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရလိမ့်မည် (တချို့က ပြောကြသည်. .. .မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ၏ ရုပ်ပုံကားချပ်များကို ခြေဖြင့် ...
မွတ်ဆလင် နှစ်ဦးမှ စစ်သားတစ်ဦးကို လူရှေ့တွင် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြ မှု ဗြိတိန်တွင်ဖြစ်ပွား၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၉၆၉ အဖွဲ့ ကဲ့သို့ပင် ဗြိတိန် EDL အဖွဲ့ဝင်များ ဆန္ဒပြ
လူ(၂)ဦးသည် တာဝန်ချိန် ပြင်ပတွင် မြို့ထဲ အေးအေးလူလူ သွားလာနေသည့် စစ်သားတစ်ဦးအား မြို့လယ်ခေါင်တွင် ဓားနှင့်ထိုးသတ်ပြီး ခေါင်းဖြတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ [im...
လက်နက် အရောင်း အ၀ယ်ဂိုဏ်း ဒက္ကားမြို့တွင် ဖမ်းမိ
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့တော်တွင် လက်နက် အရောင်းအ၀ယ် လုပ်သော မှောင်ခိုဂိုဏ်း တစ်ခုကို လက်နက်များနှင့် အတူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အထူး ရဲထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့က ဖမ်...
[image: Bangladesh-arms-traffickers-including-a-female-Indian-national] ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့တော်တွင် လက်နက် အရောင်းအ၀ယ် လုပ်သော မှောင်ခိုဂိုဏ်း တစ...
မေလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၃ အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ပင်လုံ ကတိကဝတ်များ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးရန် ကချင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ (WMR) ...
[image: ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအပေါ်အကြံပြုတင်ပြခြင်း ======================================== ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ကြမယ်ဆိုဘာတွေပြင်ကြမှာ...
ကွန်ပျူတာထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဦးဘဂျမ်းကာတွန်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကို ညနေပိုင်းက ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းတွေကို ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ဖတ်ခဲ့ဖ...
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး မြန်မာနိုင်ငံ သို့ရောက်ရှိ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးစွာတွေ့ဆုံမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးနှင့် ဇနီး သည် မေ ၂၄ ရက်၊ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ...
ဂမ်းနမ်စတိုင် တေးသီချင်းအား စွန့်လွှတ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု Psy ပြောကြား
[image: ဂမ်းနမ်စတိုင် တေးသီချင်းအား စွန့်လွှတ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု Psy ပြောကြား] ဆိုးလ် မေ ၂၄
ကမ္ဘာကျော် တောင်ကိုရီးယား ရက်ပ်အဆိုတော် Psy က သူ၏ အောင်မြ...
ရန်ကုန်မှာနေတယ်။ အသက်က ၂၁ နှစ်။ အလုပ်အကိုင်က အွန်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်မီဒီယာ လစာက မိသားစု ချောင်ချောင်လည်လည်ရှိ။ ငယ်ပေမယ့် ကြိုးစားလို့ တစ်မိသားစုလုံး ဝန်က...
မိုင်းဆတ် နယ်မြေခံ တပ်မတော် ဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသလျက် ရှိသော ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ များအား ကြည့်ရှု အားပေး
[image: မိုင်းဆတ် နယ်မြေခံ တပ်မတော် ဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသလျက် ရှိသော ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ များအား ကြည့်ရှု အားပေး]
နေပြည်တော် မေ ၂၄ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးခ...
ကျွန်မမှာ ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်( မြန်မာပြည်အား ဈေးကွက်တင်ခြင်း )
1999 ခုနှစ်တုန်းက ဆရာကြီး ဦးစောဆိုင်မွန်သာက ပြောပြခဲ့တာ။ ကုလားတွေဟာ တရုတ်ကိုကြောက် တယ် တဲ့။ တရုတ်တွေကတော့ ဂျပန်ကိုကြောက်ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆရာလို့ မေးတော့...
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးကို သွားခါးပိုက်နိူက်သူ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မိရင်ချွမ်းဟာ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တုန်း က အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ကား ဂိတ်ကနေ လှည်းတန်းကို အမှတ် ၄၃ ကားလိုင်းက ဒိုင်နာကားစီးပြီး သမ...